LAYAAB: Koox isku caleemo saartay hanashada horyaalka English Premier League – Gool FM
LAYAAB: Koox isku caleemo saartay hanashada horyaalka English Premier League
Haaruun April 20, 2021
(England) 20 Abriil 2021. Koox ka dheesha horyaaka Premier League oo aan qeyb ka ahayn lixda kooxood ee waa weyn ayaa isku caleemo saartay ku guuleystay horyaaka fasal ciyaareedkii 2018-19.
Kooxda Wolverhamton Wanderers ayaa isku caleemo saartay ku guuleysiga horyaalka Premier League ee labo sano kahor oo ah xilli ciyaareedkii 2018-19, kaasoo ay si rasmi ah ugu guuleysatay Manchester City.
Lixda kooxdood ee waa weyn ee horyaaka Premier League ayaa shalay waxa ay Axaddii la soo dhaafay saxiixeen heshiis ay ugu biirayaan horyaaka cusub oo ay sameysteen 12 ka mid ah kooxaha ugu waa weyn Yurub, kaasoo loo bixiyey European Super League.
Warar soo baxay ayaana sheegaya in kooxahan ku midoobay European Super League laga qaadi doono horyaalada iyo koobabka ay ku guuleysteen, waxaana iyadoo arrintaas ka ambaqaadaysa ay Kooxda Wolves isku qortay inay ku guuleysatay horyaalkii 2018-19 ee Premier Leaue.
Kooxd Wolves waxa ay isku caleemo saartay inay ku guuleysatay horyaalkii Premier League ee 2018-19, maxaa yeelay waxa ay ku dhammaysteen booska todobaad ee Premier League, waxaana ay ka dambeeyeen lixda kooxood ee waa weyn kuwaasoo ku biiray aas-aaska Super League.
Wolves ayaa ku kaftantay inay tahay kooxda horyaakaas ku guuleysatay, marba haddii kooxihii ka horreeyey ay jirto suuro-galnimo ain horyaalka Premier Leaue laga saarayo.
Saameynta uu European Super League ku leeyahay heshiis kordhinta Lionel Messi ee Kooxda Barcelona